Service Manager (Agri)(2) Posts at Tharaphu Soe Myint
Service Manager (Agri)(2) Posts
Mayangon, Yangon 04 September 2018
Job Reference: MJ1493011917089
အသက် (၂၈ - ၃၅ ) နှစ်ကြား ယောကျာင်္းလေးဖြစ်ရပါမည်။
တက္ကသိုလ် BE(mechanical) ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။
လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ Service ပိုင်းအတွေ့အကြုံ (4) နှစ်ရှိရပါမည်။
ရောင်းချထားသောစက်ပစ္စည်းများကို လယ်သမားများထံ Service ပေးနိုင်ရမည်။ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် နှစ်ချုပ်စာရင်းများပြုနိုင်ရမည်။
Management Team သို့ လိုအပ်ချက်များ တင်ပြနိုင်ရမည်။ သတင်းတင်ပြမှုကောင်းမွန်စွာလုပ်ပေးနိုင်ရမည်။
English Skills (or) Chinese Skills
ကားလိုင်စင်နှင့် မော်တော်ကား ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ရပါမည်။
ရောင်းချထားသော စက်ပစ္စည်းများကို customer များထံ Service လုပ်ပေးရပါမည်။
customer relationship ကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ရပါမည်။
အပတ်စဉ်၊ လစဉ် နှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ပြုစုနိုင်ရပါမည်။
monitoring and evaluation လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမည်။
သတ်မှတ် ထားသော target များအတိုင်း ပြည့်မှီအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမည်။
Management Team သို့ လိုအပ်ချက်များ နှင့် Strategies, Plan and Procedures များ တင်ပြပေးနိုင်ရပါမည်။
သတင်းတင်ပြမူနှင့် သတင်းဖြန့်ဝေနိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမည်။
၀န်ထမ်းဌာနများအချင်းချင်း သတင်းချိတ်ဆက်မှုကို ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမည်။
၀န်ထမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာ စီမံနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာထံ သတင်းပေးပို့ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
Attractive Salary Package~ Lunch! Travelling Allowance!
Senior Quantity Survey Engineer (Civil) - M/F Barons & Fujikura EPC Co.,Ltd
Document Controller/First Aider (Thilawa SEZ) PEB Steel Myanmar
Operation Management in Manufacturing SP Bakery
Project Manager/Project Engineer (Civil)Male (Yangon)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Mandalay Golden Wing
Magway Division 22 February 2019
Operator （assembly operator) Gold AYA Motors International Group Company Limited
Maintenance technician for final assembly equipment Gold AYA Motors International Group Company Limited
Spare Part Manager (Yangon) (4) Posts Tharaphu Soe Myint
Service Manager (Bus) Male (2) Posts Tharaphu Soe Myint
Assistant Service Manager (Kubota and Boton) (2) Posts Tharaphu Soe Myint
Service Manager (China Tractor) Male (2) Posts Tharaphu Soe Myint
MAINTENANCE EXECUTIVE City Mart Holdings Limited
Sales Engineer -4Post (Mottama Trading Co.,Ltd.) Mottama Holdings Ltd
Curtain Wall Estimator - (2) Post (Min Dhama Co.,Ltd.) Mottama Holdings Ltd
Manager (Production) Mottama Trading Co.,Ltd. Mottama Holdings Ltd
Electrical Engineer - (1) Post Sea Lion Co.,Ltd
Quality Control Engineer (Male) CP MOTOR MYANMAR CO.,LTD.
Senior Engineer ( Livestock Farm ) Eastern Group of Companies
Assistant Chief Engineer (Pyin Oo Lwin) HTOO HOSPITALITY
Mandalay Ayeyarwady Division 21 February 2019
Sales Support Engineer-MHE JJ-Pun